Home Wararka Midowga Africa oo muujiyay inay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka Rooble & Farmaajo
Midowga Africa oo muujiyay inay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka Rooble & Farmaajo
Midowga Afrika ayaa sheegay in aad uga walaacsan yihiin khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Hadalka ka soo yeeray hogaanka Midowga Africa oo ciidamo ka joogaan Soomaaliya ayaa muujiyay inay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka Rooble & Farmaajo
Guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat ayaa Madaxda ugu sarreysa dalka in xiisadda siyaasadeed ee ka dhaxeysa ay ku soo gaba gabeeyaan wada hadal.
Isga oo sii hadlaya ayaa waxaa uu yiri “Midowga Afrika ayaa mar kale ballan qaaday in uu sare u qaadi doono taageerada uu siinayo nabad waarta iyo siyaasadda xasilloon ee Soomaaliya”.
Midowga Afrika ayaa kamid ah ururda dowladda Soomaaliya ka taageera arrimaha Amniga, iyada oo ay hoostagaan ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom
Previous articleGud. Gobolka Hiiraan oo war kasoo saaray dagaal xalay ka dhacay Baladweyne
Next articleMidowga Musharaxiinta oo u muuqada kuwa kala qeybsamay & qaar u galay Fahad
maxaa sabab u ah in dib loo dhigo Doorashada Madaxtinimo ee...
Gudoomiyaha Barlamaanka KG ayaa loo doortay Amb Ali Fiqi